Listings in အဝေးပြေးကားလိုင်းများ and တယ်လီဖုန်းလိုင်းစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း in မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in အဝေးပြေးကားလိုင်းများ and တယ်လီဖုန်းလိုင်းစနစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း in မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Showing 12 of 621 results
ကန်ထရိုက်တာ (အဆောက်အဦ) 5
ကလေးအဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ 265
ကားတာယာ၊ ကျွတ်နှင့် ဘီးခွေရောင်းဝယ်ရေး 213
ကားဘမ်ပါ၊ ရှဲလ်နှင့် ဘော်ဒီအပိုပစ္စည်းများ 7
ကားဘရိတ်နှင့် ကလပ်ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး 70
ကားမီးသီး၊ မီးခွက်နှင့် အခြား 84
ကားရေဆေးဆီထိုး စက်ပစ္စည်းများ 4
ကားရောင်းဝယ် တင်သွင်းသူများ 219
ကားအင်ဂျင်ဝိုင်နှင့် အခြားစက်ဆီ 9
ကားအလှဆင်လုပ်ငန်းနှင့် ကားအလှပစ္စည်းဆိုင် 101
ကိတ်နှင့် မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းများ 209
ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းများ 193
ကိုရီးယားဘာသာစကားပြော သင်တန်းများ 20
ကော် (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) 1
ကော်ဇော၊ ဖယောင်းပုဆိုး၊ ဖျာနှင့် မိုးကာရောင်းဝယ်ရေး 143
ကော်ဖီမစ် ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများ 20
ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ 37
ကျူရှင် (ဘာသာစုံ) 432
ကြော်ငြာလုပ်ငန်း (အောက်ဒိုး) 2
ကြော်ငြာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ 168
ကွန်ကရစ် (အသင့်ဖျော်ပြီး) 12
ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်သုံး ကိရိယာများ 2
ကွန်ပျူတာ နည်းစနစ်ဝန်ဆောင်မှု 7
ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများ 186
ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ 23
ကွန်ပျူတာနက်ဝပ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ 10
ကွန်ပျူတာပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ 78
ခန်းမဆောင်များ (ငှားရမ်း) 111
ခေါက်ဆွဲ၊ကြာဆံ (အမျိုးမျိုး) 97
ဂက်(စ်)မီးဖိုနှင့် အပိုပစ္စည်းများ 72
ဂျုံ (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) 2
ငရုတ်ဆီ (ထုတ်လုပ်) 5
ငရုတ်သီးနှင့်ငရုတ်သီး ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ 11
ငါးဖမ်းပိုက်နှင့် ကိရိယာမျိုးစုံ 13
ငါးမုန့်၊ ပုစွန်မုန့် 8
စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း 315
စက်ဘီးနှင့် အပိုပစ္စည်း 109
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် တည်ဆောက်သူများ 32
စတီး(လ်)ပစ္စည်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး 57
စာရင်းကိုင်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန် 54
စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကိုင်များ 24
စာအုပ်ချုပ်၊ စက္ကူဖြတ်လုပ်ငန်း 45
စာအုပ်ထုတ်ဝေ၊ ဖြန့်ချိရေးကိုယ်စားလှယ်များ 25
စားတော်ဆက်များ (ဂျပန်အစားအစာ) 15
စားသောက်ဆိုင်များ (မုန့်ဟင်းခါး၊ မုန့်တီ) 51
စားသောက်ဆိုင်များ (မြိတ်ရိုးရာ) 4
စားသောက်ဆိုင်များ (ရှမ်းရိုးရာ) 103
စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ 103
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ဓာတုဗေဒပစ္စည်း 143
ဆန်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး 28
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ 59
ဆောက်လုပ်ရေး၊ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ 90
ဆေးကုခန်းများ (ခွဲစိတ်အလှပြင်) 31
ဆေးကုခန်းများ (ပုဂ္ဂလိက) 583
ဆေးကုခန်းများ (အထူးကု) 41
ဆေးရုံများ (ပုဂ္ဂလိက) 54
ဆေးရုံများ (ပြည်ပ) 22
ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ 14
ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများ 52
ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ 210
ထုတ်ပိုးဖြည့်ဆည်း ပစ္စည်းကိရိယာများ 64
ဒန်၊ သံဖြူ၊ သွပ်ပစ္စည်းများ 79
ဒီဇိုင်းအလှဆင်ပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းများ 2
ဓာတ်ငွေ့ (လုပ်ငန်းသုံး၊ဆေးရုံသုံး) 16
ဓာတ်လှေခါး၊ စက်လှေခါး 22
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေး လုပ်ငန်းများ 23
နိုင်ငံခြားဆေးမျိုးစုံဆိုင် (လက္ကား) 33
နံရံမျက်နှာစာ အလှဆင်လုပ်ငန်း 1
ပန်းအမျိုးမျိုးနှင့် အလှပန်းထိုးလုပ်ငန်းများ 45
ပလတ်စတစ်ကြိုစက် လုပ်ငန်းများ 1
ပလတ်စတစ်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ 7
ပလတ်စတစ်ဈေးဝယ်အိတ် (ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ချိ) 1
ပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုး 13
ပလတ်စတစ်အိတ် အမျိုးမျိုး 43
ပိုက်နှင့်ရေစုပ်စက် အပိုပစ္စည်းများ 3
ပုဆိုးအမျိုးမျိုး (လုံချည်) 188
ပုလင်းအဖုံးနှင့် အပိတ်များ 1
ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံး အပိုပစ္စည်းများ 5
ပဲခွဲစက်၊ ပဲအမှုန့်ကြိတ်စက်များ 98
ပွဲရုံများ (ကွမ်းသီး) 33
ပွဲရုံများ (ငါးခြောက်၊ ပုစွန်ခြောက်) 24
ပွဲရုံများ (ငါးပိ၊ ငံပြာရည်) 1
ပွဲရုံများ (ဆန်) 448
ပွဲရုံများ (တိရစ္ဆာန်အစာ) 3
ပွဲရုံများ (သကြား၊ကြံသကာ) 128
ပွဲရုံများ (အထွေထွေ) 54
ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ 3
ဗီဒီယို (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) 16
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်နှင့် နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင် 315
ဘက်ထရီနှင့် အပိုပစ္စည်း 123
ဘဏ်များ (ပုဂ္ဂလိက) 198
ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ 4
ဘိလပ်ရည်နှင့် ဖျော်ရည်စုံလုပ်ငန်း 102
ဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ လမ်းယာဉ်ကြောဘေးကင်းမှု ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ သင်္ဘောသား အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ 4
မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 1221
မီးစက်၊ထရန်စဖော်မာ ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး၊ အငှား 88
မီးသတ်ဘူးနှင့် မီးသတ်သုံးပစ္စည်းများ 19
မုန့်နှင့်မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး 36
မုန့်ဖုတ်ရာတွင် သုံးသောအမှုန့် 2
မူကြို ကျောင်းများ 192
မော်တော်ဆိုင်ကယ် ရောင်းဝယ်သူများ 278
မော်တော်ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းဆိုင်များ 568
မော်တော်ဆိုင်ကယ် ဦးထုပ်ဆိုင်များ 39
မှန်နှင့် ကြည့်မှန်အမျိုးမျိုး 116
ယာဉ်သုံးဆီပန့်နှင့် ကိရိယာများ 12
ရေကူးကန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ဆောင်မှု 2
ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 20
ရေခဲသေတ္တာပြုပြင် ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ 193
ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာသုံးပစ္စည်းများ 74
ရေဆိုးသန့်စင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ 3
ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ 179
ရေယိုစိမ့်မှုကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ 5
ရွှေပန်းထိမ်၊ ရွှေဆိုင်များ 571
လက်ဝတ်ရတနာ အရောင်းဆိုင် 32
လုံခြုံမှုထိန်းသိမ်းရေး စနစ်နှင့်ကိရိယာများ 125
လေမှုတ်စက်ရောင်းဝယ် ထုတ်လုပ်သူများ 15
လေအေးပေးစက် ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး 218
လျှပ်စစ်ဒိုင်နမို၊ မော်တာ ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး 176
လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု 11
လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေး 927
လျှပ်စစ်မီးဆိုင်းနှင့် အလှဆင်ပစ္စည်းများ 3
လျှပ်စစ်သုံးလက်သမား ကိရိယာအမျိုးမျိုး 14
ဝါယာ၊ ကေဘယ်အမျိုးမျိုး (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) 17
သင်္ဘောဆေးနှင့် ဘားနစ် 156
သစ်ဆိုင်များ၊ သစ်စက်များ 19
သစ်သားအချောကိုင် လုပ်ငန်း 34
သတ္ထုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီများ 33
သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှု 4
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ 13
သုတ်ဆေးနှင့် အလှဆင်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများ 1
သောက်ရေသန့် (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) 247
သံဂဟေဆက်ပစ္စည်းနှင့် ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းများ 127
သွားနှင့် ခံတွင်းဆေးကုခန်းများ 247
ဟိုက်ဒြောလစ် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဟိုက်ဒြောလစ်ဆီ 20
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း 9
ဟိုတယ်သုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ 28
အခမ်းအနား ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်း 19
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြော သင်တန်းများ 185
အဆောက်အဦ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ 5
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ 35
အထည်ပန်းထိုးစက်နှင့် စက်ပန်းထိုးလုပ်ငန်းများ 110
အပ်ချုပ်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်း 143
အပ်ချုပ်စက်ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်း 8
အမျိုးသမီး အဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ 201
အမျိုးသားအဝတ်အထည် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ 87
အမွှေးတိုင်၊ အမွှေးတုံး 12
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများ 52
အလူမီနီယံလုပ်ငန်းနှင့် အလူမီနီယံပစ္စည်း 271
အလှပြင်ခန်းမ (ခြေ၊ကိုယ်) 32
အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက်၊ ကြာဆံခြောက် (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) 3
အိတ်အမျိုးမျိုး (အခြား) 205
အိမ်တွင်းအလှဆင် လုပ်ငန်းနှင့်ပစ္စည်းများ 366
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အရောင်းဆိုင်များ 70
အိမ်၊ ခြံ၊ မြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ 219
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်း ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး 458
အုတ်၊ ထုံး၊ သဲနှင့် ကျောက်အမျိုးမျိုး ရောင်းဝယ်ရေး 402
အခန်း ၂၆၊ ၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ အင်ကြင်းဆောင်၊ သီရိမန္တလာတိုက်တန်း၊,
အခန်း ၂၆၊ ၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ သီရိမန္တလာတိုက်တန်း၊ အင်ကြင်းဆောင်၊, ,
အမှတ် အက်ဖ်-၇၊ မဟာအောင်မြေကားကြီးဝင်း၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊, ,
??-????????? , ??-?????????
အမှတ် ၂၁၃၊ (၃၀)လမ်း၊ ရဝလမ်းနှင့် ၇၁လမ်းကြား၊ ရွှေပြည်မန္တလာဝင်း၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
09-91007228 , 09-402534248
09-91007228, 09-402534248, 09-777773050
09-792044447 , 09-792044448
အမှတ် မ-၁၅၊ ကျွဲဆည်ကန်ကားကြီးဝင်း၊, ,
AA Express [Mandalay-Lashio-Magway-Minbu]
အမှတ် အဆောင်-၂၊ အခန်း ၁၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ အဆောင်သစ် တောင်ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
Academy Highway Express [Mandalay-Yangon]
အမှတ် အဆောင်-ဂျီ/၁၊၂၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း အရှေ့ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-799940884 , 09-799944600
09-799940884, 09-799944600, 09-799944588, 09-799940885
All Star [Man-Monywa]
၃၄လမ်း၊ (၇၉)လမ်းနှင့် ၈ဝလမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-256536015 , 09-402669711
09-256536015, 09-402669711, 09-33778866
Apex [Mandalay-Kyaut Padaung-Myingyan-Taung Thar]
၈ရလမ်း၊ (၂၄)လမ်းနှင့် (၂၅)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-766583992 , 09-950021111
09-766583992, 09-950021111, 09-444558911, 09-444558922
အမှတ် စီစီ-၁၊ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာကားဝင်း၊,
09-73504692 , 09-402666212
Boss Express [Mandalay-Yangon]
အမှတ် အဆောင်-ခ/၇-၉၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ အနောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-250292980 , 09-250292981
09-250292980, 09-250292981, 09-250292982
Chindwin King [Mandalay-Monywa]
၂၉လမ်း၊ ၇၉လမ်း ထောင့်၊ ဟေမာဇလ၊, ,
09-976606881 , 09-777233344
Diamond Group [Man-Mya Taung-Htee Chaint]
မြောက်ဘက်တိုက်တန်း၊ သီရိမန္တလာကားကြီးဝင်း၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-256163789 , 09-797600826
Elite Express [Man-Yangon-Nay Pyi Taw-Monywa-Pyin Oo Lwin-Taunggyi-Maw La Myine]
အမှတ် က/၁၃၈၊ (၃၀)လမ်း၊ ၈၂လမ်းနှင့် ၈၃လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
09-977838226 , 09-977838227
09-977838226, 09-977838227, 09-977838228, 09-977838229
Elite Express [Mandalay-Yangon]
အမှတ် အက်ဖ်-၄၊ ၅၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း၊ မြောက်ဘက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-977838224 , 09-977838225
Famous Express [Famous Traveller International Co.,Ltd. [Mann-Yangon]
(၃၁)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,